Kenyaatiga oo Mandhera degan oo bilaabay barakac iyo qaxii ugu darnaa abid - iftineducation.com
Kenyaatiga oo Mandhera degan oo bilaabay barakac iyo qaxii ugu darnaa abid
iftineducation.com – In ka badan 10,000 oo macallimiin ah iyo 16,500 shaqaalaha rayidka ah ee u dhashay dalka Kenya ayaa diiday in ay u shaqo tagaan magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyiga Bari Kenya, iyagoo ka cabsi qaba mid la mid ah xasuuqii argagixisinimo ee lagu laayay 28 qof labo maalin ka hor.
Ururada Shaqaalaha Kenya, oo u badan dad ka shqeeya waxbarashada iyo gargaarka ayaa waxay sheegeen in aysan u shaqo tagi doonin gobolka Waqooyi bari Kenya. halka dadkii deganaa ay bilaabeen in ay ka fogaadaan deegaanadaasi ilaa ay dowladda ka damaanad qaadeyso amaankooda.
Ehelada dadkii lagu laayay oo u baroor diiqaya dadkooda
Waxaa lagu soo waramayaa in in dad badan oo ka shaqeynayay Mandhere oo aan Soomaaliga Kenyatiga aheyn in ay ku qaxeen garoonka ciidamada cirka ee Kenya ee halkaasi ku yaal si Sabtidii, weerarkii lagu laayay 28ka qof kadib.
Ururka ay ku midaysansan yihiin shaqaalaha Kenya ayaa ku baaqay in macallimiinta iyo shaqaalaha caafimaadka ay isaga soo tagaan magaalada Mandhera iyo qaybaha kale ee waqooyi bari Kenya.
Dhamaan duulimaadyada iyo basaska Mandheera ka soo baxaya ayaa buuxa oo aan lahayn meel laga soo raaco.
Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkii Sabtidii lagu dilay 28 qof oo saarnaa gaari bas ah oo kasoo tegay Mandhere.
Fanaaniin ayaa iska dhalay fanaanada ugu taageerada badan -Nala daawo
Daawo Cali Khaliif Galeydh oo wiilkiisa u carbinaayo Siyaasadda Somalia